प्रशिक्षण स्नातक वा विशेषज्ञहरूको कार्यक्रमको अनिवार्य भाग अभ्यास, औद्योगिक वा पूर्व डिप्लोमाको पासपोर्ट हो। प्रत्येक शैक्षिक संस्थान (उच्च वा व्यावसायिक) यसको आफ्नै आवश्यकता र विधिगत सिफारिशहरु लाई विकास गर्दछ । तर केवल नियम यो छ कि विद्यार्थीले प्रतिवेदनमा प्रतिवेदनहरू जगेडा राख्नुपर्छ। यसको विस्तृत विवरणमा उनीहरूको सामग्री र दर्ताको नियमहरू विचार गरौं।
उत्पादनको अभ्यासमा रिपोर्ट गर्नुहोस्
यो दस्तावेज खातामा यसको उद्देश्य लिन तयार गरिएको छ, यसको मुख्य हो:
व्यावसायिक अनुशासनमा सैद्धान्तिक ज्ञान र कौशललाई समेट्न;
यो क्षेत्रमा व्यावहारिक दक्षता प्राप्त गर्नुहोस्;
प्रसोधन कागजातहरूको नियमहरू अध्ययन गर्न;
कामको छनौट गरिएको क्षेत्रसँग सम्बन्धित व्यावसायिक योग्यताहरूको तत्वहरू विकास गर्नुहोस्।
उत्पादन प्रविधिको संगठनद्वारा चुने प्रशिक्षणको विशेष क्षेत्रमा आयोजित हुनुपर्छ। यसको नियम, एक नियमको रूपमा, विशेष अनुशासनका शिक्षकहरू हुन् जो मुख्य विद्यार्थीहरूमा अभ्यास गुमाउँदै विद्यार्थीलाई सल्लाह दिनुपर्ने बाध्यता छन्, तुरुन्तै उभरिरहेको संगठनात्मक मुद्दाहरू सुल्झाउने। नतिजाको रूपमा, यो उल्लेख भएको रूपमा, उहाँले प्रकृयाको आधारमा एक रिपोर्ट प्रदान गर्दछ, दर्ताको आधारभूत आवश्यकताहरु लाई ध्यान दिँदै। यसमा एक शीर्षक हुनु पर्छ, पेजहरूको संख्या, एक परिचय, मुख्य भाग र निश्चित रूपमा निष्कर्षको साथ निष्कर्ष। आधारभूत खण्डमा बस्छौं। यस अभ्यासमा रिपोर्ट कम्पनीको संक्षिप्त विवरण, यसको क्रियाकलापको विवरण र विद्यार्थीको काममा रहेको कामको क्षेत्रहरू समावेश गर्दछ। अन्तमा, उहाँले परिणामहरू उठाउनुभयो, अप्ठ्यारो र पूर्ण वर्गहरूलाई तकनीकी असाइनमेन्टमा मिलाउने। नतिजाको रूपमा, टाउको रिपोर्टको समीक्षा संकलन गर्नु पर्दछ, अभ्यासको नतिजामा चिन्हको सिफारिस गर्दछ। साथै विद्यार्थीले आयोगलाई सामुहिक रिपोर्टको रक्षा गर्नु पर्छ।
स्नातक अभ्यासमा रिपोर्ट गर्नुहोस्
यो सामान्यतया गत वर्षको लागि योजना बनाइएको छ। प्राप्त परिणाम, एक नियमको रूपमा, अन्तिम योग्यता कार्यको व्यावहारिक भाग लिखित आधार हो ।
इन्टर्नशिप मा रिपोर्ट निम्नानुसार हुनु पर्दछ: उद्यमको संक्षिप्त वर्णन, यसको गतिविधि र संगठनात्मक संरचनाको दायरा, विद्यार्थीले काम गरेको, नौकरी जिम्मेवारी, नतिजा र निष्कर्ष। आठौंको काम एक व्यावहारिक भाग हुनुपर्छ, आवश्यक गणना, प्रयोग, अध्ययन र परिणामहरूको औचित्य को लागी।
अघिल्लो डिप्लोमा अभ्यासको सफल गुप्त अन्तिम परीक्षणको अन्तिम चरण हो। यसैले, एक सकारात्मक मूल्याङ्कनको लागि यसको सुरक्षा एक गारंटी हो कि विद्यार्थीहरूले चाँडै उच्च वा माध्यमिक शिक्षाको डिप्लोमा पुरस्कार पाउनेछन्। यसका लागि उनीहरूले छनौट गरिएको व्यावसायिक क्षेत्रमा आफैंलाई महसुस गर्ने मौका पाउनेछ।
क्रास्नोयार्स्क राज्य शैक्षणिक विश्वविद्यालय (केएसपीयू) वीपी। Astafieva: संकाय, विशेषता, रक्टर
कोइम्बरा, पोर्चुगल: विस्तृत जानकारी, वर्णन र रोचक तथ्यहरू
डिप्लोमाको रक्षा के हो?
एक जोडामा के गर्नु हुन्छ जब बोरिंग?
दाखलता नोड्स कसरी बुनना गर्न?
मौरी, स्ट्रबेरी, किट्टी: rezinochek को तथ्याङ्कले कसरी बुनाई गर्न
Kislovodsk, "खनिज पानी उपत्यका" (स्पा): समीक्षा, फोटो
गृह र उचित पोषणमा प्रेसको लागि व्यायाम गर्दछ
विवरण र प्रयोगकर्ता "Melitora"